AT & T inoti yakange iri pamutemo zvakakwana kutengesa dunhu renzvimbo yevashandisi, asi ichiririmira - BGR - TELES RELAY
HOME » upfumi AT & T inoti yakange iri pamutemo zvakakwana kutengesa dunhu renzvimbo yevashandisi, asi rakaramba rakamira - BGR
AT & T yave iri iyo yekutsoropodza pamusoro pemwedzi yekupedzisira ye12 - pamwe chete nevatakuri vemitambo Sprint, Verizon uye T-Mobile - apo pepanhau rinorondedzerwa pamusoro pemutambo wevatakuri vanozvitengesa nzvimbo pamusoro pe vanozvishandisa. IWatch Communications Commission yakavhura upfumi nevatakuri vakavimbisa kusiya tsika iyi.
Panguva imwecheteyo, tsamba itsva yakagadzirwa neAAT & T inodzivirira maitiro ayo yakadanwa.
Mutsamba yake kune FCC Commissioner Jessica Rosenworcel, AT & T inokurudzira tsika yekugadzira nzvimbo yevatengi inowanika kune zvikwata mune zvimwe zviitiko zvinorondedzerwa munyaya ino. zvakakwana zvakakodzera. "Panogona kunge iri yechokwadi uye ine mikana inobatsira kuponesa upenyu," anodaro mutakuri, "apo kambani inodhonza inogamuchira nzvimbo yemudzidzi anokanganisa asingazivi iri pedyo nechepamusoro. kana mwanakomana kana mwanasikana anoshandisa kurapa kwechiremba kuti awane hama yakwegura yakakuvara; kana bhangi rinoshandisa ruzivo rwekutsvaga kuti rurwise unyengeri uye rurege kuba. "
Mufananidzo Wemusoro: Jacquelyn Martin / AP / REX / Shutterstock
Kujekesa izvi zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakudengenyeka inongova pfungwa inokosha. AT & T inotsanangura mumutsamba wayo kuti haina kuputsa mutemo wezvematongerwo enyika nokuti data iyo yakaita kuti iwanikwe kune vanhu vatatu pasina ruzivo rwemushandisi iyi inonzi inozivikanwa seA- GPS. Iyi ndiyo mhando yedata yakaunganidzirwa kuti ishandiswe mumamiriro ezvinhu akaoma uyewo kana GPS inoda, sekuda iyo motokari yako yeUber iri kuedza kukuwana iwe uchishandisa chiratidzo kubva foni yako. Izvi zvakasiyana nemhando yedata iyo FCC haikwanise kutengesa uye iyo iyo inogarwa mune izvo zvinonzi National Emergency Address Database (NEAD), iyo inofanana neAT & T inonyanya kujekesa kupfuura A-GPS.
Nokudaro, inotaura neA AT & T, mapepa epepanhau "pamusoro pezvinodiwa zvepamutemo zvinosanganiswa neA-GPS" hazvina kururama uye hazviitiki. Iyo kambani inoratidzawo kuti yakanga yarega kutengesa dunhu renzvimbo yevashandi kune zvikwata nevamwe.
A piece of vava kuda Chishanu, zvisinei, n inoratidza kuti kunyange zvazvo AT & T ingave "yakarurama" pakutsvaga kuti haina kuputsa mitemo yeC FCC, kutengeswa kwenzvimbo yedhara kunogona kuve iko kukanganisa kweChitsauko 222 che 1934 communications.
Mufananidzo Unobva: Justin Lane / EPA / Shutterstock